Boqor Cabdullahi Boqor Muuse – Dhambaal tacsiyeed iyo baaq adkayn amni. – Radio Daljir
Bossaso, Nov 13 – Aniga oo ku hadlaya magacayga, magaca beelaha Daarood, iyo dawlada Puntland ee Soomaliya waxaan marka hore tacsi u dirayaa dhamaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen marxuumiintii dhintay ee kala ahaa Sheekh Maxamed Cabdi Awaare iyo Xildhibaan Ibraahim Cilmi Gaab.
Waxaan kale oo uga tacsiyadaynayaa dhamaan Shacabka reer Puntland dilalka foosha xun ee aan dhaqanka iyo caadada midna u ahayn umada reer Puntland, waxaan Ilaahay inooga baryayaa inuu samir iyo iimaan inaga wada siiyo, way inaka wada dhinteen waana falal fool xun oo laga xumaato marxuumiinta dhintayna waxaan Ilaahay u weydiinayaa inuu janooyinkiisa waasaca ugu deeqo .
Wax garadka, waayeelka, culimaa?udiinka, xukuumada, golayaasha sharcidejinta, iyo dhamaan Madaxdhaqameedka Puntland waxaanu ugu baaqaynaa in deg deg loogu hortago dhibaatooyinka foosha xun oo yimi, oo maanta ay noqoto maalintii ugu danbaysay ee falal caynkaan oo kale lala beegsado Puntland, laga hadlo nabada iyo wacyigalin ku saleeysan Amaanka oo noqotaa mid bulshada iyo masuu?liyiinta ay iska kaashato.
Waxaanu kula dardaarmaynaa Xukuumada Puntland, baarlamaanka Puntland, Issamada iyo shacabka Puntland dhamaan in si wadajir ah loo ilaaliyo nabad geliyada oo ah hantida keliya ee maanta Puntlnd ay haysato ee aynu kaga duwanahay walaaleheena Koonfureed; hadaba walaalayaal aynu Ilaaha weyn ku shukrino kuna mahadino nabad geliyada iyo xasiloonada oo aynu ilaashano Ilaahayna weydiisano inuu inoo siyaadiyo.
Eebe talada ha na waafijiyo, kuwii asiibana naga yeelo.
Boqor Cabdullahi Boqor Muuse